Fihetseham-po ve no ifidianana? | Hevitra MPANOHARIANA
hi hi hi - mpianatra mahafatrapo an'i ravalo izy izany.
Nampidirin'i pissoa @ 17:57, 2007-12-09 [Valio]
marina zany e, fikan'ra8 talou ihany zany kanou :)
fa zao alou e, tsy haiko na mila soratana ity, fa ny tena essentiel dia ny ol hifidy azy. Zany hoe tsy voatery mahaangona zato ambiarivo akory, satria tsy milaza velively izany fa hifidy anao doly ireny olona ireny. Mety hoe intimidation ihany hoan'ny mpifanandrina izany hoe jere ny ol mankaty aminay kanefa, efa fara-doboka anie io e. Ny y ol mety efa t@ larobia na lakamisy tany ny ankamaroan'ireo hifidy dia efa kopy hoe ity nena no fidiko :)
ny ambiny resaka fialan-tsasatra fotsiny :P
ka hoy aho hoe, @ andron'ny fifidianana izany no tokony hiara-hanisa doly ny ol rehetra @ zay tena hahitana ny safidim-bahoaka marina, sa ahoana :)
Nampidirin'i simp @ 21:49, 2007-12-09 [Valio]
Ny an'i Zafy aza mbola nisy saka mainty. Fa zany hoe tsy nisy fifidianana tamin'izay aloha e :-p
Nampidirin'i lap @ 10:35, 2007-12-10 [Valio]
Efa hita aloha hoe iza ilay ho lany e! (xxx mahavita azy). Fa ny mahafinaritra ny masoko dia ny mahita fa nisy fahatahorana sy fikoropahana be tao tamin'ny vao fiaingan'ny fampielezan-kevitra. Raha ny fifidianana nisesy mantsy dia toa nisoritra fa mbola any amin-dry zalahy ny fon'ny mpifidy (prezidansialy, referandaoma, antenimieram-pirenena), na dia hita ho miha-mahazo vahana aza ireo "voailikilika". Kanjo vao niseho ny TGV dia koropaka tsy nisy toa azy. Ilay kandida efa nantsoina sy nomena loka hono hoe hatao kandida eto @ Tanàna nosoloina an'i mahavita azy tampoka indray, ka lasa nanao indépendant tsy fidiny. Avy eo nomena ny mahavita azy ihany koa hatramin'ny fiara tena ankafizin'i Ramose fa sao resy eo! Dia samy gaga ny olona hoe mbola nanaovana investissement betsaka kokoa noho ny hafa rehetra ity.
Any @ commune ambanivohitra avy any aminay (Ambanitsena Manjakandriana) dia kandida 1 ihany no hofidiana. Izany zalahy ka demokrasia...
Nampidirin'i DotMG @ 13:45, 2007-12-10 [Valio]
Antananarivo tsy maintsy arovana no tena tanjona! Manahy ny mpitondra fa raha vao lasan'olon-kafa ny eto dia izay no izy ny aminy. Tsy avelany handehandeha fotsiny io fifidianana rahafakampitso eto Antananarivo io.
Nampidirin'i jentilisa @ 16:27, 2007-12-10 [Valio]
tsy hahatoky piso izany fa trondro ny loaka
Nampidirin'i Rajiosy @ 22:03, 2007-12-10 [Valio]
Marina fa tsy maintsy arovana Antananarivo, kanefa ny fomba anaovana an'ilay fiarovana no mampiampanga tena azy ireo. Aiza ilay finoana? Toa niharihary tampoka teo fa hay misy halemena lehibe tao? Mino marimarina aho fa raha natao tamin'ny fomba tsotra kokoa ity fampielezan-kevitra ity vao mainka aza nety kokoa ho an'ny mahavita azy. Tombony lehibe ho azy ny fotodrafitrasa efa mijoro, satria tsy azo lavina fa ireo ben'ny tanàna maro teto talohan'ny Maire Marc Ravalomanana dia tsy nahavita nanova endrika ny tanàna, nefa koa ny vahoaka nahantra ihany.
Tsy nahomby kokoa ve raha nanao hoe: Samy tanora izahay, samy mety hahavita azy, kanefa "Tano ny azo fa sarotra ny mila"? An'ny vahoaka rehetra Antananarivo fa tsy anay PDS, koa omenay azy hanaovany faradoboka i Mahamasina?
Izao indray mandeha ny resaka fividianam-tsafidy, izay mahavalalanina hoe ny mpifaninana 2 lehibe no mifampiampanga amin'izany, dia manjary menatra izahay mponina hoe olona toy izany ve no be mpifidy any aminareo (na ny iray mpanendrikendrika na ny iray nanao ilay fahotana?)
Nampidirin'i DotMG @ 06:32, 2007-12-11 [Valio]
Io resakao io mihitsy izao no saiky horesahiko amin'ny lahatsoratro manaraka!
Nampidirin'i jentilisa @ 06:53, 2007-12-11 [Valio]
Papango lahy anaty katsaka ireo e ! izay mivoaka babany avokoa. Basin'anglisy ka ny feon-drainy ihany no feon-janany.... samy manan-kolazaina sy mahay vava fa dia ho hitantsika eo ihany... Alakamisy maraina any mety efa hisy ny ampaham-bokatra voalohany. Misaotra an'i Jentilisa aloha amin'ny fanadihadiana foana. Tena marina ve ireo tantarain'ise ireo ? Nilaina ilay sary maty an !!!! Fa ny ahy aloha... fantatro izay ho fidiako na dia hifanaratsy eo aza e !
Nampidirin'i Tsikisariaka @ 10:01, 2007-12-11 [Valio]
za mahita fa tsy ny isan'ny olona mpanatrika no mitondra an'io. Hitanareo nisy fifidianana izay dia be da be no nijery an'ingahy M (tsy hanonona anarana fa manahirana) tao @ coum 67ha. rehefa tonga ny valim-pifidianana, tsss inona akory no teo.
Raha olona @ ville matetika efa mahafantatra ny hofidiany, fa ny any ambanimbanivohitra no mbola matetika misalasala indrindra rehefa kandida tsy mbola fantany no milatsaka.
Mazotoa mifidy daholo ary e!
Nampidirin'i maintikely @ 11:26, 2007-12-12 [Valio]